Mụta Mmetụta nke Ịzụ ahịa Forex | FXCC Risk ngosi
Home / Banyere / 24 / 5 Nkwado / Egwu ngosi
Onye nwe ahịa ekwesịghị itinye aka na ego ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na Financial Instruments ọ gwụla ma ọ maara ma ghọta ihe ize ndụ dị na nke ọ bụla n'ime Financial Instruments. Ya mere, tupu itinye akwụkwọ maka akaụntụ, Onye ahịa kwesịrị ichebara anya ma itinye ego na Ngwaọrụ Financial bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ya n'ọnọdụ ọnọdụ ya na ego.
A na-adọ onye ahịa ahụ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ ndị a:
Ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ikwenye na isi ụlọ ọrụ nke onye ahịa ahụ ma ọ bụ uru ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ ego ọ bụla etinye ego na ngwaọrụ ọ bụla.
Onye ahịa ahụ kwesịrị ikweta na, n'agbanyeghị ozi ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike inye, uru nke ego ọ bụla na Financial Instruments nwere ike ịgafe ala ma ọ bụ karịa ma ọ bụ ọbụna ihe nwere ike ịbụ na ego ahụ agaghị aba uru ọ bụla.
Onye ahịa ahụ kwesịrị ikweta na ọ na-agba nnukwu ihe ize ndụ nke ịda mbà na nbibi site na ịzụta na / ma ọ bụ ire nke ngwá ọrụ ọ bụla ma kweta na ọ dị njikere ime ihe ize ndụ a.
Ozi banyere arụmọrụ gara aga nke ngwaọrụ Instrument anaghị ekwenye na ọ dị ugbu a na / ma ọ bụ n'ọdịnihu. Ojiji nke ihe omuma edere abughi oke amuma ma obu nchedo nke oma maka oru ozo nke mekorita nke uzo ego nke ozi a kwuru.
A na-agwa onye ahịa ugbu a na azụmahịa ndị a na-arụ site na ọrụ ọrụ nke Ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịbụ ụdị ọdịdị. Nnukwu ofu nwere ike ime na oge dị mkpirikpi, nhata nchịkọta ego niile e debere na Ụlọ ọrụ ahụ.
Ụfọdụ ngwá ego nwere ike ghara ịghọ mmiri mmiri ozugbo dị ka nkwụsị nke chọrọ na onye ahịa nwere ike ọ gaghị anọ n'ọnọdụ iji ree ha ma ọ bụ nweta nchịkọta ihe ọmụma banyere uru ndị a bara uru ma ọ bụ ọnụọgụ ndị metụtara ha
Mgbe a na-ere ngwá ọrụ ego na ego ọzọ karịa ego nke obodo obibi nke onye ahịa ahụ, mgbanwe ọ bụla na ọnụego mgbanwe nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na uru ya, ụgwọ na arụmọrụ ya.
Ngwa ngwá ọrụ na ahịa ndị ọzọ nwere ike ibute ihe ize ndụ dị iche na ihe ndị dị na ahịa ndị ahịa na ebe obibi nke onye ahịa. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe ize ndụ ndị a nwere ike ibu. Olileanya nke uru ma ọ bụ ọnwụ site na azụmahịa na ahịa mba ọzọ na-emetụta mgbanwe mgbanwe mgbanwe.
Ngwongwo Ngwurugwu Nhọrọ (ntụgharị nhọrọ, ọdịnihu, ntụgharị, swap, CFD, NDF) nwere ike ịbụ ọrụ azụmahịa na-abụghị nke na-enye ohere iji nweta uru na mgbanwe na ọnụego ego, nnweta, ahịa ahịa ahịa ma ọ bụ ọnụahịa ọnụahịa kpọrọ ngwá ọrụ . Enwere ike ịnweta uru nke Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ na ego nke nche ma ọ bụ ngwá ọrụ ọ bụla ọzọ nke bụ ihe nnweta.
Ntugharị / ahịa nwere ike ịba ụba. Ọnụahịa nke Ngwá Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ, tinyere CFDs, na akụ na ala Indices nwere ike ịmalite ngwa ngwa na ntaneti sara mbara ma nwee ike igosi ihe ndị a na-enweghị ike ime ma ọ bụ mgbanwe n'ọnọdụ, onye ọ bụla n'ime ha enweghị ike ịchịkwa ya.
Ọnụahịa nke CFDs ga-emetụta, site na ihe ndị ọzọ, gbanwee nnyefe ma rịọ ka mmekọrịta, ọchịchị, ugbo, azụmahịa na ahia mmemme na ihe ndị metụtara àgwà uche nke ebe ahịa dị mkpa.
Onye nwe ahịa ekwesịghị ịzụta Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ ọhụụ ọ gwụla ma ọ dị njikere itinye ihe ize ndụ nke ịnwụ kpamkpam ego niile o tinyere na ọrụ ọ bụla na mmefu ndị ọzọ.
N'okpuru ọnọdụ ahịa ọ nwere ike sie ike ma ọ bụ agaghị ekwe omume ime usoro
Ikwusi Nkwụsị Ịkwụsị Ụda Ihe na-enye aka ịkwụsị ọnwụ gị. Otú ọ dị, n'okpuru ọnọdụ ahịa ụfọdụ, mkpochapụ nke Njedebe Ọgwụgwụ nwere ike ịdị njọ karịa ego ọ kwadoro na nkwụfu ndị a ghọtara nwere ike ibu karịa ihe a tụrụ anya ya.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ isi obodo ahụ agaghị ezu iji jide ọkwa ugbu a, enwere ike ịkpọ gị itinye ego ọzọ na obere oge ma ọ bụ belata mgbasa. Ịghara ime nke a n'oge achọrọ ya nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ ọ bụla.
Otu Bank ma ọ bụ Broker onye ụlọ ọrụ ya na-arụkọ ọrụ nwere ike inwe ọdịmma dị iche na nke ọdịmma gị.
Enweghi ike nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ nke Bank ma ọ bụ Brokaja nke ụlọ ọrụ ahụ jiri rụọ ọrụ ya nwere ike iduga n'ọkwá gị ka emechie gị.
Onye nlekọta nke ndị ahịa ahụ na-adọrọ mmasị na ego ndị a na-akwụ ụgwọ n'oge a ma ọ bụ na ọ gaghị enwe obi ike na a ga-ekwu ọnụahịa n'oge ọ bụla ma ọ bụ na ọ nwere ike isiri ike imepụta azụmahịa na ọnụahịa nke a pụrụ ikwu n'ihi na enweghị ọnụahịa otu.
Ịzụ ahịa na ntanetị, n'agbanyeghị otú o si dị mma ma ọ bụ ịrụ ọrụ nke oma, ọ gaghị ewetakwa ihe ize ndụ ndị metụtara azụmaahịa ego
Enwere ihe ize ndụ na ahịa ndị ahịa na Financial Instruments nwere ike ịbụ ma ọ bụ bụrụ ụtụ ụtụ isi na / ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ n'ihi mgbanwe nke iwu ma ọ bụ ọnọdụ onwe ya. Ụlọ ọrụ ekwenyeghi na ụtụ isi na / ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ ga-akwụ ụgwọ. Onye ahịa ahụ kwesịrị ibu ọrụ maka ụtụ isi ọ bụla na / ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ nke nwere ike ịba ụba maka ahịa ya.
Tupu onye ahịa ahụ amalite ịzụ ahịa, ọ ga-enweta nkọwa gbasara ọrụ niile na ụgwọ ndị ọzọ nke onye ahịa ahụ ga-atụle. Ọ bụrụ na anaghị ekwupụta ebubo ọ bụla na okwu ego (ma dịka ọmụmaatụ dị ka agbasaa mgbasa ozi), Onye ahịa kwesịrị ịjụ maka nkọwa ederede, gụnyere ihe atụ kwesịrị ekwesị, iji kwado ihe ebubo dị otú ahụ nwere ike ịpụta na okwu ego
Ụlọ ọrụ ahụ agaghị enye onye ahịa ahụ ndụmọdụ gbasara ego maka itinye ego ma ọ bụ azụmahịa nwere ike itinye na nkwụnye ego ma ọ bụ mee ntinye ego nke ụdị ọ bụla
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịchọrọ ijide ego onye ahịa ahụ na akaụntụ nke na-ekewapụrụ ndị ahịa ndị ọzọ na ego Ụlọọrụ ahụ dịka iwu ndị dị ugbu a, ma nke a nwere ike ọ gaghị enweta ụgwọ zuru oke.
Mmekọrịta maka Online Trading Platform na-ebute ihe ize ndụ
Ọ bụrụ na Onye ahịa ahụ na-emekọrịta ihe na kọmputa, ọ ga-ekpughe na ihe ize ndụ metụtara usoro ahụ tinyere ọdịda nke ngwaike na ngwanrọ (Internet / Servers). Ihe si na ngwụcha usoro ọ bụla nwere ike ịbụ na iwu ya agaghị eme ya dịka ntụziaka ya si dị ma ọ bụ emeghị ya ma ọlị. Ụlọ ọrụ ahụ anabataghị ụgwọ ọ bụla n'ihe banyere ọdịda dị otú a
Enwere ike ịdekọ mkparịta ụka ekwentị, ị ga-anakwere ụdị ndekọ ndị ahụ dịka ihe nkwekọ na njigide nke ntụziaka
Ntughari a enweghi ike ikwuputa ma obu kpughewa ihe ojoo nile na ihe ndi ozo di iche iche n'inyere aka n'ile ihe ndi ozo na ego